Magaalaan Ambo Dr. Mararaa fi qabsaayota hidhaa bayaniif simannaa oo'aa goote - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Magaalaan Ambo Dr. Mararaa fi qabsaayota hidhaa bayaniif simannaa oo’aa goote
Magaalaan Ambo Dr. Mararaa fi qabsaayota hidhaa bayaniif simannaa oo’aa goote
Magaalaan Ambo, dachiin goototaa fi sabboontotaa, guyyaa har’aa Dr. Mararaa fi qabsaayota hidhaa bayaniif simannaa oo’aa taasiste. Ummanni Oromoo kumaatamaan daanditti bayuudhaan simannaa Dr. Mararaa fi gootota keennaa irratti kan argame.
Sirni simannaa magaalaa Ambootti goototaaf taasifame kuni fardaa fi mallattoolee gootummaa fi seenaa Oromoo callaqisan hedduun kan midhaage ture. Kanaan alattis, sinri simannaa kun kan daran tokkummaa fi injifannoon Oromoo cululuqee irratti mudhateedha.
Previous articleMootummaan Woyyaanee waadaa seene cabse
Next articleDhDUO’n Jaarmayaalee Oromoo hunda waliin hojjachuuf qophii ta’uu isii ibsite